भारतबाट कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन के गर्दैछन् नेपाली राजदूत ? « Postpati – News For All
माघ ७, काठमाडौँ । भारत सरकारले नेपाललाई सहयोगस्वरूप दिने प्रतिबद्धता गरे अनुसारको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप चाँडै नेपाल भित्रिने भएको छ ।
अन्य विदेशी मुलुकबाट खोप कहिले आउने भन्ने अन्योल चिर्दै छिमेकी मुलुकबाट सबैभन्दा पहिले खोप आउने सुनिश्चित भएको छ ।
भारत सरकारले त्यसका लागि प्रक्रिया शुरू गरिसकेको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले जानकारी दिए । ‘अबको केही दिनमा नै भारत सरकारका तर्फबाट नेपाललाई प्रदान गरिने खोपको घोषणा गरिँदैछ, त्यसपछि पहिलो चरणको खोप नेपाललाई पठाउनेछ,’ उनले भने । नेपाललाई दिने खोपको घोषणा लगत्तै खोप ढुवानीको अन्य प्रक्रिया शुरू हुने उनले स्पष्ट पारे ।
राजदूत आचार्यका अनुसार निकटको छिमेकी मुलुकको नाताले पनि भारतबाट खोप नेपाल भित्र्याउने सवालमा निकै राम्रो प्रगति भएको छ । भारतबाट आउने खोपको केही मात्रा अनुदानको हुनेछ भने अन्य खरिद प्रक्रियाअनुसार हुने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालको कूल जनसंख्यालाई पुग्ने खोप भारतबाटै ल्याउन पहल भइरहे पनि पहिलो चरणमा कूल जनसंख्याको ३ प्रतिशत खोप भारतबाट आउने छ । राजदूत आचार्यले खोप नेपाल भित्र्याउनका लागि खोपको अन्तिम परीक्षण चलेकै बखतदेखि पहल थालेका थिए । जसका लागि त्यहाँस्थित खोप निर्माता तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग संवाद गरेर नेपालमा खोप भित्र्याउने वातावरण बनाएका थिए । भारत बायोटेकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप विकास गरेको हो ।
राजदूत आचार्यले नेपालको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप भारतबाट ल्याउने तयारी रहेको बताए । शुरूआतमा आउने ३ प्रतिशत भने अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेकाका लागि प्रयोग गरिने छ । दोस्रो चरणमा आउने १७ प्रतिशत खोप भने जोखिममा रहेका समूहका लागि हुने गरी ल्याइने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
नेपाललाई भारतबाट खोप सुनिश्चित गर्न केही दिनअघि भारतमा भएको संयुक्त आयोगको बैठकले ठूलो भूमिका खेलेको राजदूत आचार्यले जानकारी दिए । बैठकमा भाग लिन भएका परराष्ट्रमन्त्री सहितको प्रतिनिधिमण्डलसामु भारतका विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशंकरले खोप नेपाललाई आवश्यकताअनुसार दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
आचार्यले भनेजस्तै नेपाल सरकारले सबै जनसंख्यालाई पुग्ने कूल ७२ प्रतिशत खोपको आवश्यकता पूर्तिका लागि भारतसहित विभिन्न छिमेकी मुलुकमा कूटनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जसमध्ये ४० प्रतिशतसम्म खोप भारतबाट ल्याउन अनुदान र खरिद दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले जानकारी दिए ।
खोप ल्याउनुअघि र ल्याएपछि के कसरी काम अगाडि बढाउने भन्ने रिहर्सलसम्मको अन्तिम प्रक्रिया नेपालले पूरा गरिसकेको छ ।
भारतबाट आउने भनिएको ४० प्रतिशतमध्ये पहिले ३, त्यसपछि १७ र अन्तिममा २० प्रतिशत खोपको मात्रा भारतबाट ल्याइने योजना छ । भारतबाट आउनेमध्ये विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले अनुदानमा दिने भनेको कोभ्याक्स अनुदान अन्तर्गत पनि केही मात्रा पर्नेछ । जसअनुसार २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप अनुदान अन्तर्गत नेपालले पाउनेछ ।
भारतबाट खोप नेपाल ल्याउँदा ढुवानी खर्च समेत कम पर्ने र खोपको मात्राको मूल्य पनि कम पर्नेछ । बाँकी ३२ प्रतिशत खोप अन्य मुलुकबाट नेपाल भित्र्याउनका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढेको डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
नेपालको खोप भण्डारण क्षमतासँग समेत मेल खाने हुनाले पनि यो खोप सहज भण्डारण हुनेछ । जसका लागि २ देखि ८ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रमको भण्डारण क्षमता अनुकूल हुनाले पनि भारतबाट आउने खोपका लागि नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतमा भने यतिबेला जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेकालाई धमाधम खोप लगाउने काम जारी रहेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार १ नम्बर प्रदेशमा सहसचिव डा. तारा पोखरेल, २ नम्बर प्रदेशका लागि डा. मदन उपाध्याय, बागमती प्रदेशका लागि डा. गुणराज लोहनी, गण्डकी प्रदेशका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम, लुम्बिनी प्रदेशका लागि डा. विकास देवकोटा, कर्णाली प्रदेशका लागि डा. अनुज भट्टचन र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि डा. कृष्ण पौडेललाई प्रमुख व्यक्ति तोकिएको छ । नेपालमा कोरोनाको पहिलो संक्रमण गत वर्ष माघ ९ गते देखिएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।